ဒါရိုက်တာ Ryan Coogler ဟာ Black Panther နောက်ဆက်တွဲကို ရိုက်ကူးတော့မယ်
12 Oct 2018 . 12:26 PM
Black Panther (2018) မှာ အောင်မြင်မှုများစွာရထားတဲ့ ဒါရိုက်တာ Ryan Coogler ကို နောက်ဆက်တွဲရိုက်ကူးဖို့ Marvel Studios နဲ့ သဘောတူညီမှုရနေပြီလို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ Black Panther (2018) ဟာ လူကြိုက်များခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁.၃၄၇ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁,၃၄၇ သန်း) အထိကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမကားမှာ အောင်မြင်မှုရခဲ့တာကြောင့် Marvel Studios အနေနဲ့ ဒုတိယနောက်ဆက်တွဲမှာလည်း Ryan Coogler နဲ့ လက်တွဲချင်ဟန်ရှိပါတယ်။
Creed (2015) နဲ့ Black Panther (2018) ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ အောင်မြင်မှုရလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ Ryan Coogler ဟာ မင်းသား Michael B. Jordan နဲ့ Wrong Answer (ဖြန့်ချိနှစ် မကြေညာသေး) ရုပ်ရှင်ကားအတွက် ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Ryan Coogler ဟာ Black Panther နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားမှာလည်း ဒါရိုက်တာအနေနဲ့သာမက ဇာတ်ညွှန်းဆရာအနေနဲ့ပါ တာဝန်ယူဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဇာတ်ညွှန်းကို ၂ဝ၁၉ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ ရေးသားဖွယ်ရှိပြီး ရိုက်ကူးရေးကို ၂ဝ၁၉နှစ်ကုန်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ၂ဝ၂ဝနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ စတင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကဲ . . . Black Panther နောက်ဆက်တွဲဟာ မကြာခင်အချိန်မှာပဲ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ရောက်လာတော့မှာဆိုတော့ Marvel Fan တွေအတွက် ပျော်စရာပါပဲ။
ဒါရိုကျတာ Ryan Coogler ဟာ Black Panther နောကျဆကျတှဲကို ရိုကျကူးတော့မယျ
Black Panther (2018) မှာ အောငျမွငျမှုမြားစှာရထားတဲ့ ဒါရိုကျတာ Ryan Coogler ကို နောကျဆကျတှဲရိုကျကူးဖို့ Marvel Studios နဲ့ သဘောတူညီမှုရနပွေီလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။ Black Panther (2018) ဟာ လူကွိုကျမြားခဲ့ပွီး ဝငျငှေ ဒျေါလာ ၁.၃၄၇ ဘီလီယံ (ဒျေါလာ ၁,၃၄၇ သနျး) အထိကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ပထမကားမှာ အောငျမွငျမှုရခဲ့တာကွောငျ့ Marvel Studios အနနေဲ့ ဒုတိယနောကျဆကျတှဲမှာလညျး Ryan Coogler နဲ့ လကျတှဲခငျြဟနျရှိပါတယျ။
Creed (2015) နဲ့ Black Panther (2018) ရုပျရှငျတှနေဲ့ အောငျမွငျမှုရလာတဲ့ ဒါရိုကျတာ Ryan Coogler ဟာ မငျးသား Michael B. Jordan နဲ့ Wrong Answer (ဖွနျ့ခြိနှဈ မကွညောသေး) ရုပျရှငျကားအတှကျ ပွငျဆငျနပေါတယျ။ Ryan Coogler ဟာ Black Panther နောကျဆကျတှဲဇာတျကားမှာလညျး ဒါရိုကျတာအနနေဲ့သာမက ဇာတျညှနျးဆရာအနနေဲ့ပါ တာဝနျယူဖှယျရှိပါတယျ။
ဇာတျညှနျးကို ၂ဝ၁၉ခုနှဈအစောပိုငျးမှာ ရေးသားဖှယျရှိပွီး ရိုကျကူးရေးကို ၂ဝ၁၉နှဈကုနျပိုငျး ဒါမှမဟုတျ ၂ဝ၂ဝနှဈဆနျးပိုငျးမှာ စတငျဖှယျရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ကဲ . . . Black Panther နောကျဆကျတှဲဟာ မကွာခငျအခြိနျမှာပဲ ဖနျသားပွငျပျေါမှာ ရောကျလာတော့မှာဆိုတော့ Marvel Fan တှအေတှကျ ပြျောစရာပါပဲ။